Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 75980 အဆိုပါ Burrow ပြန်လည်သုံးသပ်အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု
22 / 08 / 2020 23 / 09 / 2020 ရော့ Paton 2606 Views စာ0မှတ်ချက် 75980 အဆိုပါ Burrow အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု, ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်တစ်ဝက်-သွေးမင်းသား, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်
75980 အဆိုပါ Burrow အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု အရမ်းတောက်ပတဲ့အရာအားလုံးကိုသရုပ်ပြခြင်းပါ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အခုအချိန်မှာ။
အချို့သောအမှန်တကယ် sm နှင့်အတူart အပြင်ဘက်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတွင်းပိုင်းသွင်ပြင်၊ 75980 အဆိုပါ Burrow အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု အရုပ်အိမ်ပေးထားတယ် Lego နှစ်ခုအကြားအလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်းမရှိဘဲ, display နှင့်လက်လှမ်းနှင့်ကစားအကြားကျွမ်းကျင်စွာဟန်ချက်ညီတည်ဆောက်။ ၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေး sm ဖြစ်ပါတယ်art အသေးစိတ်အချက်အလတ်ကိုထုပ်ပိုးပြီးအာကာသစခန်းတိုင်း၌ကစားရန်ထိရောက်မှုရှိပြီး၎င်းသည်အရင်းအမြစ်ပစ္စည်း၏ရှုပ်ထွေးပြီးရှုပ်ထွေးသောအနှစ်သာရကိုဖမ်းယူနေစဉ်အရေးကြီးသည်။
အမည်သတ်မှတ်မည် - 75980 အဆိုပါ Burrow အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု theme: Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ
စျေးနှုန်း: £ 89.99 / $ 99.99 / € 97.47 အပိုင်းပိုင်း: 1047 အသေးစားပုံများ: 8
75980 အဆိုပါ Burrow အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု ၎င်း၏အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းကနေအများကြီးအကျိုးရှိသောအစုတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်မှာ Hogw ၏အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်arts Castle သည်ထပ်ခါတလဲလဲသို့မဟုတ်အကျွမ်းတဝင်ရှိသောနယ်မြေများသို့ကျရောက်ခြင်းကိုတစ်ခါတစ်ရံကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ Burrow သည် Weasley အိမ်ထောင်စု၏ကောက်ကျစ်၊ မြင့်မားသောအပြင်ဘက် မှနေ၍ မတူကွဲပြားသောသဘာဝမှသည်အလုပ်များပြီးထုပ်ပိုးနေသောမိသားစုဘ ၀ ၏ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်သည့်အထိများသောအားဖြင့်လတ်ဆတ်သောမြေကိုလမ်းခင်းပေးသည်။ nooks နှင့် crannies galore နှင့်အတူကြမ်းပြင်။ အဆိုပါ Burrow ကျေးဇူးတင်စကားသော hectic ရှုပ်ထွေးသည် Lego ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ရရှိနိုင်သော Group ၏တက်ကြွသောအရောင်အသွေးနှင့်အပိုင်းအစများရွေးချယ်ခြင်းကိုထူးခြားစွာဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သည် Lego ပုံစံ။
တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်စာမျက်နှာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသည်။ စာအုပ်များနှင့်ရုပ်ရှင်ကားများမှကိုးကားချက်များစွာ ပြုလုပ်၍ ၎င်းကို ap ဖြစ်စေရန်artများအတွက် icular မွေ့လျော် ဟယ်ရီပေါ်တာ ပရိတ်သတ်တွေ။ သင်တည်ဆောက်သည့်အရာနှင့်သင်မည်သို့ဆောက်လုပ်သည်ကိုသိလိုစိတ်လည်းရှိသည်။ အဆုံးမှာအတူတကွပါ ၀ င်သောအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အခန်းအမြောက်အမြားထုတ်လုပ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်တံခါးဖွင့်ပေးသောကြီးမားသောအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။xtra လက်လှမ်းမီမှုနှင့်ကစားနိုင်မှုအဆင့်။
အဆောက်အ ဦး ၏အပေါ်ထပ်ရှိကြမ်းပြင်ပေါ်ရှိကြမ်းပြင်သည်ပုံစံကိုအလွယ်တကူပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ အပြင်ဘက်အပြင်ဘက်မှအတွင်းပိုင်းကိုနောက်သို့ကူးပြောင်းခြင်းမှာအဆင်မပြေသော်လည်းအတွင်းနှင့်အပြင်အရောင်များရောစပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကောင်းသည်။ ၎င်းသည်အာရုံများအားအလွန်အကျွံထောက်ပံ့ပေးသောအစုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကြည့်ရှုနေသည့်အရာများစွာရှိသည်။
အသေးအဖွဲရှစ်ခုစုစုပေါင်းသည် ၇၅၉၈၀ Attack အပါအဝင် Burrow အပေါ်တိုက်ခိုက်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ, Nymphadora Tonks၊ Bellatrix Lestrange နှင့် Fenrir Greyback နှင့် Weasleys လေးယောက် - Ron, Ginny, ArtHur နှင့် Molly ။ အခင်းအကျင်းအနေဖြင့်ပြန်လာပြီးကတည်းက minifigure ရွေးချယ်မှုသည် ap ဖြစ်ခဲ့သည်artများအတွက် icular အစှမျးသတ်တိ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာရှစ်ယောက်စလုံးသည်ဤနေရာတွင်ကောင်းမွန်သောဆက်နွယ်မှုကိုထည့်သွင်းထားပြီး၎င်းတို့သည်ဇာတ်လမ်းအားဖြင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်နေသောအစုတစ်ခုတွင်ပေါ်လာသည်။ သင်၏စိတ်တွင်မည်သူပါဝင်နိုင်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ထဲပျံ့လွင့်နေလျှင်တောင်မှမည်သူမျှမရှိပါ (သို့သော်၎င်းတို့သည်ပါ ၀ င်မှုအတွက်တူညီသောသက်ရောက်မှုရှိသည့်အခြားအစုံများတွင်လည်းကောက်ယူနိုင်သည်) ။
ဟယ်ရီ၏အသေးစားရုပ်ပုံတစ်ခုတည်းကိုသာလွှတ်ပေးသည့်အချိန်တွင်အခြားအစုများ၌တွေ့ရလိမ့်မည်။ တစ်ခုချင်းစီ၏ဒီဇိုင်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး၎င်းတို့သည်ရှုပ်ထွေးသည်ကဲ့သို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသော်လည်းဇာတ်ကောင်များ၏အင်္ကျီများမှတိုက်ရိုက် Burrow ရှိထင်ရှားသောမြင်ကွင်းများတွင်ပေါ်လာသည်။ in ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့်ဝက်သွေးသွေးမင်းသားရုပ်ရှင်။
သုံးနှစ်ကြာအသေးစားပုံစံရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းပိုင်းတွင်အမှားအယွင်းမရှိခဲ့ပါ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့် 75980 အဆိုပါ Burrow အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု အဘယ်ကြောင့်အဘို့ကြီးစွာသောဥပမာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
£ 89.99 မှာလာမယ့်, 75980 အဆိုပါ Burrow အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု ပူးတွဲဒုတိယစျေးအကြီးဆုံးအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 2018 ခုနှစ်တွင်ဆောင်ပုဒ်ရဲ့ပြန်လာကတည်းကဖြန့်ချိထားနှင့်အတူကြောင်းအနေအထား၌ထိုင် ၇၆၃၈၆ Hogwarts နက္ခတ္တဗေဒမျှော်စင်, နွေရာသီ 2020 အစုံ၏တူညီသောလှိုင်း၌၎င်း, 2018 ရဲ့ Hogw သောartဂရိတ်ခန်းမ။ အမှန်စင်စစ်စျေးအကြီးဆုံးအစုံမှထည့်သွင်းစဉ်းစားအတူ ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်ဒီစကေးကဒီသုံးခုဟာအမှန်တကယ်ပြန်လာပြီးကတည်းကဆောင်ပုဒ်ထဲမှာဈေးအကြီးဆုံး minifigure စကေးအစုံကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
ဒီဇိုင်း၊ ပြသခြင်းနှင့်ကစားခြင်းများနှင့်ထိပ်တန်းအက္ခရာအမြောက်အမြားကိုထောက်ပံ့ပေးသောအရာအားလုံးအတွက်သင့်တော်သည်မှာ 75980 သည်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းမှသင်မျှော်လင့်နိုင်သည့်အရည်အသွေးတိုးတက်မှုမျိုးကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အရည်အသွေးသည်တန်ဖိုးနှင့်လိုက်ဖက်ညီစွာစျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူအပိုင်းအစများပိုမိုများပြားလာသည်။ အမှန်မှာ၊ မည်သည့်ပမာဏမှမဆိုဒုတိယအကြီးဆုံးပမာဏဖြစ်သည်။ ဟယ်ရီပေါ်တာ နောက်တဖန်သာ behemoth နောက်ကွယ်မှ, 2018 ကတည်းကဖြန့်ချိထား ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်, နောက် ... ပြီးတော့, မျှော်လင့်ထားသည့် 75978 Diagon Alley.
အမှားနည်းနည်းရှိတယ် 75980 အဆိုပါ Burrow အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု။ ရုပ်ပုံများကိုပထမဆုံးဖြန့်ချိသည့်အခါနှင့်၎င်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ကစားခြင်းအတွေ့အကြုံသို့ကူးပြောင်းစေသည့်အကြောင်းပြချက်များကြောင့်၎င်းသည်လူအများအတွက်အထူးကြွေးကြော်သံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Burrow အတွင်းပိုင်းထိုကဲ့သို့သောမှတ်မိ, မြတ်နိုးနှင့်အမြင်အာရုံကွဲပြားခြားနားသော setting ကိုဖြစ်ပါတယ် ဟယ်ရီပေါ်တာ ကမ္ဘာကြီး Lego Group သည်ပျော်စရာကောင်းသောအရာများအားလုံးကိုစုဆောင်းရန်နှင့်၎င်းနှင့်ပတ်သက်သောပေါင်း ၁,၀၄၇ ကို ဖြတ်၍ အားစိုက်ထုတ်ခဲ့သည်။ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ဇာတ်ကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု၌လက်ထပ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤကဲ့သို့သောအစုံ၏, အစွမ်းသတ္တိကနေအစွမ်းသတ္တိကိုဆက်လက် Lego ရိုးရှင်းပေမယ့်ထိရောက်သောတည်ဆောက်နည်းစနစ်နှင့်အတူဒီဇိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုနှင့် part ရွေးချယ်ရေး။ 75980 အဆိုပါ Burrow အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု သင့်အတွက်စုဆောင်းရကျိုးနပ်သောတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်သင်၏စုဆောင်းမှုကိုထည့်သွင်းရကျိုးနပ်သည်။
75980 အဆိုပါ Burrow အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု မှာမှာယခုရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← LEGOLAND အတွင်းဟယ်လိုဝင်းလာနေသည်
DC FanDome အတွက်သီးသန့် LEGO 77906 Wonder Woman သတ်မှတ်ထားသည် →